DHABAREY: “Dhammaan Madaxda waqtigoodu dhamaaday waxa ay ku Mashquulsan yihiin xil goob intee laga sugayaa Nabad gelyo?” | Maanta Online
Home / Wararka / DHABAREY: “Dhammaan Madaxda waqtigoodu dhamaaday waxa ay ku Mashquulsan yihiin xil goob intee laga sugayaa Nabad gelyo?”
Posted by: admin in Wararka October 25, 2016	Comments Off on DHABAREY: “Dhammaan Madaxda waqtigoodu dhamaaday waxa ay ku Mashquulsan yihiin xil goob intee laga sugayaa Nabad gelyo?” 494 Views
Cabdi Salaad Dhabareey Guddoomiyihii hore ee Maamulka Degmada Hodan ee Gobolka Banaadir oo la hadlay Idaacadda Shabelle ee Magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay Dilalka Qorsheysan iyo Qaraxyada maalmihii dambe ku soo badanayay Magaalada Muqdisho.
Dhabareey ayaa ku adeeyay in Masuuliyiinta Dowldda Federaalka Soomaaliya in ay ku mashquuleen xil raadis ayna dayaceen Masuuliyadooda.
“Dhammaan Madaxda waqtigoodu dhamaaday waxa ay ku Mashquulsan yihiin xil goob intee laga sugayaa Nabad gelyo?” ayuu Yiri Guddoomiyihii hore ee Degmada Hodan.
Sidoo kale waxa uu wax laga Xumaado ku tilmaamay in Ammaanka Magaalada Muqdisho la hoos geeyo qof shacab ah oo uu ula Jeedo Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale.
“Waa dhibaato dalka ku soo korortay waxaan aragnay meel la leeyahay Madaxweyne iyo 2 Gobornatooro ha yeeshaan, waxaa noo keenay waxaan Fedeeraalka la leeyahay” ayuu yiri Cabdi Salaad Dhabarey Guddoomiyihii hore ee degmada Hodan.
Maalmihii u dambeeyay ayaa waxaa Magaalada Muqdisho ku sii xoogeysanayay Dilalka iyo Qaraxyada ka dhaca Magaalada Caasimadda ah ee Muqdisho waxaana ugu dambeeyay dilkii shalay Galinkii dambe lagula kacay Gaashaanle Dhexe Cabdicasiis Caraaye oo kooxo hubeysan ay ku dileen Degmada Waaberi.
Previous: Mashruuc lagu Daahfuraayay sida loo Maalgelin karo Ganacsiga Soomaaliyeed oo maanta lagu Qabtay Muqdisho + Sawirro
Next: Qalab Isboorti oo lagu Wareejiyey Kooxo ka Dhisan Deegaanka CAMAARA